कैदी नम्बर ६६६ | काव्यालय
कैदी नम्बर ६६६ | SATURDAYकलम | Kavyalaya - काव्यालय
by विकाश मरासिनी November 30, 2019
बन्दीगृहमा सबै आ आफ्ना धुनमा छन् । कोही पत्रिका पढ्दै छन्, कोही बागचाल भने कोही क्यारामबोर्ड खेल्दैछन् । अर्को कुनामा भने कोही आफ्ना पुराना कर्तुत सुनाउँदै छन् । कैदी नम्बर ६६६ भने आफ्नै कोठामा टोलाएर बसेको छ ।
कैदी नम्बर ६६६ धेरै समय एक्लै टोलाएर बस्छ । बस्न रहर होइन तर उसको एउटा आफनो छुुट्टै मान्यता छ । विचार नमिल्नेसँग बस्नुभन्दा एक्लै बस्न जाति । उसले जतबेला पनि रविन्द्रनाथ टैगोरको ‘चलो रे’ भन्ने सम्झिन्थ्यो । तर उसलाई कता पो नै चल्नुथ्यो र ? चौध वर्षलाई ऊ थन्किएको थियो । ‘सशाकं रिडेम्प्सन’ मा जस्तो जेल तोड्नु पर्ने आवश्यकता पनि थिएन । आखिर तोडेर ऊ कसको लागि पो बाँच्थ्यो र ? यस्तै सम्झेर उसले जेललाई नै आफ्नो सारा संसार ठानेको थियो ।
कति एक्लो थियो ऊ । दुई महिना अघि आएको कैदी नम्बर ४२० ले उसलाई कम्पनी दिएको थियो जसले गर्दा उसको एक्लोपन दूर भयो । ४२० को केश बडा अचम्मको थियो । उ एउटा प्राइभेट कम्पनीमा काम गथ्र्यो । उ निकै नै मेहनती थियो । अरु काम सकेपछि अन्यत्र लाग्दा भने ऊ चाहिँ आफ्नै कामको समीक्षा गरी बस्थ्यो । अफिसमा उसको मेहनतको चर्चा दिनकै हुन्थ्यो । ऊ कम्पनीमा आएदेखि त्यहाँको अवस्था निकै नै सुध्रिएको थियो । त्यति धेरै काम गर्दा पनि उसको सेवासुविधा भने धेरै थिएन । यही विषयमा उसको र बुढीको दिनकै ठाकठुक हुन्थ्यो ।
धेरै समय भएको थियो उसले आफ्नी श्रीमतीलाई छुन पाएको थिएन । उसले आफ्नो बोसलाई तलब बढाइदिने बारेमा पनि भनेको थियो तर बोस सधैँ कानमा तेल हालेर बस्थ्यो । बोसलाई थाहा थियो कि उसले कम्पनी छाडेर जान सक्दैन भन्ने कुरा । मालिक वर्गले कहिल्यै पनि आफ्नो नोकरवर्गलाई माथि उठेर जान दिंदैनन् भन्ने कुरा धेरै ठाउँमा सुनेको थियो । कार्ल मार्क्सले भनेजस्तै माथिल्लो वर्ग र तल्लो वर्गबीच सङ्घर्ष त हुने तर द्वन्दमा भने तल्लो वर्गको सधैँ हार हुने कुरा उसलाई पेटभरी थाहा थियो । दिनभर अफिसको झन्झट बेलुका घरमा श्रीमतीको कचकच । विगत तीन वर्षदेखि उसको जीवनमा यही चल्दै आएको थियो । कैलेसम्म यो सिलसिलाले निरन्तरता पाउने हो ऊ अनविज्ञ थियो ।
उसले बिहे गरेको चौँथो साल लाग्दैथ्यो । चौँथो सालको वैवाहिक लगनको अवसर पारेर उसकी श्रीमतीले उसको बोसलाई बोलाउन चाहन्थी तर उसले मान्न खोजेको थिएन । आइमाइको जिद्धि अघि जस्तोसुकै मै हुँ भन्ने वीर पनि भिजेको मुसा जस्तो हुन्छन् । ऊ त एक साधारण मानिस कसरी नाइँ भन्न सक्थ्यो र ?
भतेर लाग्छ अनेक परिकारको । बोसलाई खुशी पार्न उसकी श्रीमतीले कुनै कसुर छाडेकी थिइन । बोस पनि खुशी हुँदै मासु लुछ्दै थियो । भतेरको एक हप्ता नबित्दै उसको तलब बढ्छ । उ अचम्ममा पर्छ । किनभने उसले आफ्नो बोसलाई राम्रोसित चिन्दथ्यो । एक दिन बोसको अनुपस्थितिले उसलाई नराम्रोसँग झस्काउँछ । उसलाई शंका लाग्न थाल्छ कतै मेरी श्रीमती …… । उ नराम्रोसित झस्किन्छ । एकदिन अफिसबाट फर्किने बेलामा उसको साथी रसिद भेटिन्छ ।
रसिदले तीन दिन अघि उसकी श्रीमती अर्कैसँग कारमा मस्किएको आफ्नै आखाँले देखेको कुरा गर्छ । ४२० को खुन भल्किन थाल्छ । उ सिधै घर गई श्रीमतीलाई श्रीमतीको सलले घाँटी कसेर मारिदिन्छ । उसले एक वचन पनि नसोधिकन अपराधिक काम गर्छ । श्रीमती मारेको कसुरमा उसलाई चौध वर्षको सजाय तोकिन्छ । एकदिन जेलबाटै बोसको डिभोर्स भएको कुराले उसको मनलाई शीतल बनाउँछ । अझ बढि त कम्पनीको आधा सम्पत्ति बोसले श्रीमतीलाई दिनुपर्दा ।
आज जेलमा छुटै माहोल छ । कैदी नम्बर ६६६ को जिउ अघिपछिजस्तो आलस्यले छोएको छैन । जेलरले एकाबिहानै लट्ठी सलाखेंमा बजाउँदै आउँछ । आफ्नो छोरीको बिहे भएकाले सबैलाई लड्डु खुवाउँदै ६६६ को कोठामा आउँछ । जेलरको बारेमा उसले त्यहाँ आएको दिनै कसैले भनेको थियो । जेलर कडा मात्र नभई नरम दिलको पनि थियो । आफ्नो घरमा केही शुभकार्य हुँदा सबै कैदीहरुलाई मिठाई खुवाउँथ्यो । आज पनि केही बाँड्दै आएको छ । रमेशलाई बोलाउँदै उसले आफ्नो छोरीको बिहे भएको कुरा जनाउँछ र हातमा लड्डु दिँदै जेलर अर्को कोठामा जान्छ । रमेश हातमा लड्डु राखेर किंकर्तव्यब्युुमिढ हुुन्छ । उ आफ्नी मरेकी श्रीमतीलाई सम्झिन्छ अनि आफ्नी भूतपूर्व प्रेमिकालाई । ऊसँग अहिले केही पनि छैन । न त परिवार न त उसकी रश्मी न त रमिता । ऊसँग शून्यता मात्र थियो । बाउआमाको एक्लो छोरो हुनु बेकार रहेछ । ऊ आफ्नो भाग्यलाई सराप्छ । अरुको खुुशीको लागि मैले के गरिनँ ? अहिले मैले के पाएँ ? न त आफ्नी प्रेमिका पाएँ न त श्रीमतीको माया नै । म बेकारमा हत्यारा बनेँ । आफ्नै श्रीमतीको हत्यारा । समाजले मलाइ थुुक्छ । मलाई चौध वर्षको सजाय तोकिएको छ । मेरो जीवनको रेखा थोरै रहेछ । मैले जे बाँचे बाँचे । अबको जीवन मेरो जीवन होइन । उसलाई आफ्नो जीवन घाँडो लाग्छ । घाँडो लागेपनि ऊ मर्न सक्दैन ।
मर्ने नै भए उसले किन रश्मीलाई मार्यो त ? के रश्मी रमेशको जीवनमा यही हलचल पैदा गर्न श्रीमती बनेर आएकी हो ? कि रमेशले आफ्नी प्रेमिकालाई अँगाल्न नसकेर यो अवस्था आयो ? किन उसले आफ्नी सोलमेटलाई विहे गरेन ? किन रमेशका बाउआमाले अर्कै केटी खोजिदिए ? समाजले प्रेमको कदर किन गर्दैन ? के प्रेम गर्नु पाप हो ? आफ्नो सोलमेटसँग विहे नगरेर रमेशको जीवनमात्र नभई रश्मी र रमिताको पनि जीवन बर्बाद भएको छ । रमेश बाटोमा हिँडेको कमिलालाई देखेर तर्किने मान्छे आज कसरी हत्यारामा बदलियो ? आजकल रमेश सोफोक्लिजको नाटकको थिम्सलाई नोट गर्छ । “भगवानले हामीलाई कठपुतलीझैं नचाउँछन् ।” पातकीहरु आफू सोमरस खाई अप्सराहरुसित मस्ती गदैछन् । रमेश कसैले भगवानको नाम लिँदा नि झनक्क रिसाउँछ । आफू नित्सेको बाटो हिँड्न नसकेर ठुलो गल्ती गरेको बताउँछ । ऊ दोष क-कसलाई दिओस् ? आफूलाई ? समाजलाई ? भगवानलाई ? बाउआमालाई ? श्रीमतीलाई ?
उ आजकल फेरिएको छ । उसको मनले कसैलाई दोषी ठान्दैन आजकल । उ सपनामा सोफोक्लिज देख्छ , कामु देख्छ, नित्से देख्छ । तिनीहरुको सङ्गतले ऊ दार्शनिक हुँदै जान्छ । ऊ आजकल धेरैजसो शान्त देखिन्छ । विद्वानहरु हाँस्दैनन् मूर्खहरु हो हाँस्ने त । विद्वानहरुको भित्री आत्मा हाँस्छ जुन कुरा कसैले पनि देख्दैन । मूर्खहरुको हाँसो बनावटी हो । यो दुनियाँमा हाँस्नपर्ने कुरा केही पनि नरहेको बताउँदै ज्ञान नै हो ठुलो कुरा भन्दै ज्ञानको गुनगान गाउँछ । आफू बल्ल जन्मेको सार्थक भएको बताउँदै कैदी नम्बर ६६६ ले रश्मीलाई आफ्नो जीवनमा श्रीमती बनेर आएकोमा आफू रश्मीप्रति कृतज्ञ रहेको कुरा बताउँछ । जे हुन्छ राम्रैका लागि हुन्छ भन्ने कुरामा सहमत हुँदै ऊ वीरबललाई धन्यबाद दिन्छ ।
कैदी नम्बर ४२० आफ्नो साथी बदलेको देखेर अचम्मित हुन्छ । कैदी नम्बर ६६६ को दिन प्रति दिन अनुहारको आभा बढ्दै जान्छ । अब उसलाई छुट्टै व्यवस्थासहितको कोठामा राखिन्छ । जेलरले अबको केही समयमा ६६६ लाई सजायमुक्त बनाउने कुुरा गर्छन् । जेलबाहिर गएपछि ६६६ को टिभी पत्रिका र अनलाइनमा अन्तरवार्ता दिन भ्याइ नभ्याइ हुन्छ ।
एकदिन मेरो एक्कासि अनौठो मानिससित भेट हुन्छ । सुुरुमा मलाई लाग्यो कि यो मानिस हेभी कोकेनको नशामा छ । ऊ भन्थ्यो, “मेरो पात्र ज्यूँदो भयो । जो ज्युुँदो भयो उसको मात्र चर्चा भयो । जसले उसलाई बनायो उसको चर्चा भएन । म अन्यायमा परेँ ।” एकैछिनको बकबकपछि ऊ आफ्नो बाटो लाग्यो । भोलिपल्ट नामी अखबारको फ्रन्टपेजमा ठूलो हेडलाइनमा समाचार आउँछ, “पात्रद्धारा सर्जकको हत्या ।”
सर्जकको कथाको पाण्डुलिपि नेपालको नाम चलेको लुन्याटिक पब्लिकेसनमा रहेछ । कथा छापिने पालो आइसकेको तर सर्जकको मृत्युको कारणले अब कथा नछाप्ने बताउँदै लुन्याटिक पब्लिकेसनका साहु दोसेरामले दिएको कथाको अंश यस्तो रहेको छ ।
“रमेश के हेरेको त्यस्तरी ? त्यसरी नहेर न कस्तो लाज लाउँछ के मलाई ।” भन्दै थिइ रमिता ।
रमेश भने रमिताको आँखामा आफूलाई खोज्ने प्रयत्न गर्दै थियो ।
रमेश भन्थ्यो मलाई “केटीको रुपभन्दा उसको आँखा मन पर्छ ।”
आँखाकै कारण रमेश रमिताप्रति फिदा भएको थियो । उनीहरुको भेट पनि अचम्म तरिकाले भयो। दुबै जागिरको खोजीमा जव हाउसमा पुगेका थिए । यसै क्रममा उनीहरुको भेट भएको थियो । एकदिनको भेटले उनीहरुलाई यति नजिकसम्म पुर्याउँछ भन्ने कल्पना पनि गरेका थिएनन् । फेसबुक ट्विटर र इन्स्टा लगायतका सामाजिक सन्जालले अझ उनीहरुको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउँदै थियो । उनीहरु त्यतिमा मात्र सीमित थिएनन्, बेलामौकामा भेट्ने अवसरलाई सकेसम्म गुमाउन चाहँदैनथे ।
यसैगरी दिनहरु बित्दै थिए । फरक फरक क्षेत्रमा काम गरेपनि भेट भइरहन्थ्यो । यसैबीचमा रमेशको घरबाट रमेशको विहे गरिदिने कुरा गर्छन् । रमेशले आफ्नो प्रेम सम्बन्धको बारेमा घरमा नबताएको पनि होइन । तर उसले निरासा बाहेक केही पाएन । घरकाले खोजिदिएको केटीसँग विहे गर्नैपर्ने अवस्था आएपछि आफ्नो हठ छाड्यो । बाउआमाले भनेको नमान्न रमेशले कहिल्यै आँट गरेन । आफूलाई बाउआमाले राजकुमार सरह पालनपोषण गरेको र कहिल्यै अभाव हुन नदिएको कुरा उसलाई राम्रोसँग थाहा थियो । उता रमिता रुँदारुँदा पागल भइसकी । रमेशलाई पनि कहाँ मन थियो र बुवाआमाको आग्रहमा उसले मौनधारण गर्यो ।
प्रेम प्राप्ति मात्र हो भन्ने बुझेको रमेश अहिले प्रेम त्याग पनि रहेछ भनी रमितालाई सम्झाउँछ । नियति भनौँ या परिस्थिति उनीहरुको प्रेम सम्बन्धमा जालो लागिसकेको थियो । रमेशको विहे पल्लो गाउँकी रश्मीसित धुमधामसित हुन्छ । रश्मीमा पनि एउटा नारीमा हुने सबै गुण विद्यमान थियो । रमेशका बाउआमाको पाँच गाउँका मान्छेलाई बोलाएर भोज खुवाउने रहर पुरा भयो ।
गाउँलेहरुले खुब धोको पुर्याएर विहेको तारिफ गरे विहे होस् त यस्तो ।
तर सुहागरातकै दिन अकल्पनीय घटना घट्यो जसको बारेमा कसैले सोचेको थिएन । रातको बाह्र बजे रश्मी राम राम भन्दै चिच्याइ रहेको थिइ । रमेशले मेसो पाइसकेको थियो कि रश्मीको दिलमा अरु कसैले राज गरेको छ । रमेश अवाक् हुन्छ ऊ बोल्न खोज्छ तर मुख खोल्न सक्दैन । रश्मी आफूजस्तै बुवाआमाको कुरा टार्न नसक्दा यो अवस्थामा आएको कुरामा ऊ घोरिरहन्छ । यो कुराले बुवाआमाको मन नदुखाओस् भनी उ शान्त थियो ।
अहिले आफू निकै गलेको अनुभव गर्छ । आफूले बेकारमा प्रेम गरेकाले उ पश्चातापको भुमरीमा पर्छ । हिजो रमितालाई विहे गरेको भए आज यो दिन आउँदैनथ्यो । रमेशलाई थाहा थियो कि संसारको सबै मानिसलाई खुशी बनाउन सकिँदैन । उसको लागि बुवाआमा नै संसार थिए र त्यो संसारलाई खुशी बनाउन खोज्दा उसले आफ्नो, रमिता र रश्मीको खुशीको संसार खोस्यो । समाजले अरुलाई किन प्रेमपूर्वक बाँच्न दिदैन ? के प्रेमपूर्वक बाँच्नु प्रकृतिको खिलाफ हो ? के समाज प्रकृतिभन्दा माथि छ ?
यस्तै कुराले रमेशको माथिंगल हल्लिरहेको थियो ।
हिजो आफूलाई पूर्ण ठान्ने रमेश अहिले पुरै शून्यमा लुप्त छ ।
ऊ रश्मीसँगै सुतेपनि ऊ रश्मीलाई पाउँदैन। उसलाई लाग्छ कि रश्मीको भौतिक शरीर आफूसँग रहेपनि उसको आत्मा उडेर रामसित रासलीलामा व्यस्त छ । बिना मनको शरीरसित खेल्नु भनेको बेश्यासित खेलेजस्तै हो । रमेशलाई लाग्छ कि ऊ प्रत्येक दिन बेश्यासित सुतेको छ । वश फरक यो कुरामा छ कि उसले पैसा तिर्नुपर्दैन । रश्मीलाई सम्झाउने प्रयत्न नगरेको पनि होइन तर ऊ प्रत्येक पल असफल हुन्छ । दिनभर रश्मीसँगै हुने आत्मा रात परेपछि अन्त जान्छ । रमेशले डाक्टर वैद्य झाक्री सबैलाई देखाउँदा पनि रश्मीको उपचार हुन सक्दैन । प्रेमरोगलाई सिर्फ प्रेमले मात्र निको पार्न सक्छ ।
रमिताले आत्महत्या गर्ने प्रयास गर्छे । यता रमेशलाई चोटमाथि चोट पर्छ ।
ऊ दिन प्रति दिन सुक्दै जान्छ । ऊ न त रश्मीलाई सम्हाल्न सक्छ न त आफू नै । एकदिन बिहानै ऊ पोको पन्तुरो बाँधेर कतै जान लागेकी हुन्छे । रमेशले बुझिसकेको थियो कि अब ऊ फर्केर नआउने तरिकाले जाँदै छे । रमेशलाई के गरौँ के गरौँ जस्तो लागिराछ । उसको मुटु जोडजोडले धड्किरहेको छ । डरले उसको शरीर पसिनाले भिजिसक्यो । उसको आँत सुक्यो । ऊ बोल्न खोज्छ तर उसको मुखबाट आवाज निस्किँदैन । एक्कासि उसको शरीरमा छुट्टै फूर्ति आउँछ । ऊ उसको घाँटी च्याप्प समाउँछ । घाँटीबाट ऊ रमेशको हात फुस्काउन खोज्छे तर बलिष्ठ बाहुका सामुन्ने उसको केही जोर चल्दैन । ऊ अन्तिम प्रहरसम्म प्रयासरत रहन्छे अनि अन्त्यमा आफ्नो शरीर रमेशलाई जिम्मा लगाएर निःश्वास रहन्छे । रमेशको होस खुल्छ । ऊ आफूलाई धिक्कार्छ । आफ्नो भाग्यलाई दोष दिन्छ । रश्मी जिउँदो छँदा रश्मीको आत्मा ऊसँग थिएन । अहिले पनि ऊसँग उसको शरीर त छ तर आत्मा उडेर कहिल्यै नफर्किने गरी अन्तै गइसकेको छ । रमेशलाई थाहा थियो कि यस्तै केही हुनेछ भनेर । ऊ आफ्नी श्रीमतीले अरुको नाम जपेको सहन सकेन । आखिर कुन चाहिँ पुरुषले यस्तो सहन सक्छ र ? रमेश सिधै पुलिस चौकी जान्छ । “मैले भर्खरै आफ्नी श्रीमतीको हत्या गरेको हुँ । मलाइ जेल चलान गर्नुस् इन्स्पेक्टरसाब ।” इन्स्पेक्टर गजेन्द्रका आँखा खुलै रहन्छन् । कस्तो पागल कुरा गरेको यसले । देख्दा त पागलजस्तो देखिँदैन त फेरी ? पुलिस जवानहरु खासखुस गर्छन् । इन्स्पेक्टर गजेन्द्रले कुरा बुझ्न पुलिस जवानलाई रमेशको घरमा पठाउँछन् ।